မွတျဗုဒ်ဓအလိုတျောကြ ရဟနျးနှငျ့ မာတုဂါမ ဆကျဆံရေးကဏ်ဍ
(အရမျးကောငျးတယျ ဖတျထားပွီး လိုကျနာစခေငျြပါတယျ)
မွတျစှာဘုရားရှငျ ကိုယျတျောမွတျကွီးက ရဟနျးတှကေို မာတုဂါမ မိနျးမတှနေဲ့ ဆကျဆံရာမှာ ဘယျလိုဆကျဆံသငျ့တယျ ဆိုတာ အသအေခြာလမျးညှနျ ဟောပွဆုံးမခဲ့ပါတယျ။ ဘာလို့ ဒီလိုဟောကွားပေးခဲ့ရသလဲလို့ သုံးသပျကွညျ့ရရငျ အရိယာ ဖွဈတဲ့ ရဟနျးတှအေတှကျ မာတုဂါမဆိုတဲ့ မိနျးမတှကေ ပွဿနာမဖွဈနိုငျပမေဲ့ ပုတုဇဉျဖွဈတဲ့ ရဟနျးတျောတှအေတှကျ ကတော့ မိနျးမတှကေ အန်တရာယျတဈခုပါပဲ။
အမှိုကျကစ ပွသာဒျ မီးလောငျဆိုသလို မဖွဈရလအေောငျ တငျးတငျးကပျြကပျြ တားမွဈထားခဲ့တာလို့ ယူဆပါတယျ။ တကယျတော့ ရဟနျးဆိုပမေဲ့ ပုထုဇဉျရဟနျးတဈပါးဟာ ယောကျြားတဈယောကျနဲ့ သိပျမခွားနားပါဘူး။ စောငျ့ထိနျးရမဲ့ သိက်ခာပုဒျတှကေိုဖယျလိုကျရငျ ရဟနျးတျောဟာလဲ ယောကျြားတဈယောကျပါပဲ။ ဒါကို မာတုဂါမဖွဈတဲ့ အမြိုးသမီးတှေ သသေခြောခြာ သိသငျ့ပွီး ထိနျးသိမျးသငျ့ပါတယျ။
ခတျေအဆကျဆကျမှာ နာမညျကွီးလှတဲ့ တရားဟော ဓမ်မာစရိယ ဆရာတျောတှေ လူထှကျပွီး မိနျးမယူခဲ့တာတှေ သိကွ မွငျရပါလိမျ့မယျ။ ဒါတှကေ ဘာကိုပွသလဲဆိုရငျ အမြိုးသမီးတှကေ တရားဟော ဓမ်မာစရိယတှေ တရားဟောပွော ကောငျးပွီ ဆိုရငျ ဘယျနရောဖွဈဖွဈ လိုကျလံ နာယူကွတာ တှရှေိ့ပါတယျ။
ဟောတာပွောတာကောငျးလို့ ကွညျညိုလို့ လိုကျလံ နာယူတာကနေ ရငျးနှီးခငျမငျလိုစိတျတှေ ဖွဈလာကွပါတယျ။ ဆရာတျောတှအေနား ရောကျအောငျ သှားပွီး ခငျမငျခှငျ့ရငျးနှီးခှငျ့ကို ရအောငျယူ ခွဆေုပျ လကျနယျပွု ကုသိုလျယူကွတဲ့ အမြိုးသမီးတှလေဲ အမြားကွီးပါ။
တဈခြို့ဆို ကွညျညိုလို့ဆိုပွီး ခွစေုံကို ဦးတိုကျတဲ့ အမြိုးသမီးတှေ၊ ဆရာတျော လာမယျ့ လမျးမှာ ဆံပငျဖွနျ့ခငျးပွီး ဆရာတျောကို နငျးလြှောကျစကော ပူဇျောတဲ့ အမြိုးသမီးတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ ကိုယျက ကွညျညိုစိတျနဲ့ လုပျတာ မှနျပမေဲ့ ဆရာတျောတှကေလဲ ပုတုဇဉျ လူသား ယောင်ျကြားတှဆေိုတာကို မမသေ့ငျ့ပါဘူး။
လိုအပျတာထကျ ရငျးနှီးလာပွီ ဆိုရငျ သဒ်ဓါလှနျတော့ တဏှာကြှံဆိုသလိုတှေ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ရဟနျးတျောတှေ ဘကျကကွညျ့ရငျလဲ ငယျစဉျကလေးဘဝကတညျးက ကိုရငျဝတျ စာဝါလိုကျ အသကျ(၂၀)ပွညျ့ပွနျ တော့ ရဟနျးခံ စာဝါလိုကျဆိုတော့ မိနျးမအကွောငျး သိဖို့ခဲယဉျးလှပါတယျ။ ဒီလိုမြိုးနဲ့ ရဟနျးဖွဈလာခဲ့တဲ့ ငယျဖွူဆရာတျောတှဆေိုရငျမိနျးမနဲ့ပကျသကျတဲ့ အတှအေ့ကွုံ နညျးလှနျးလှပါတယျ။
တဈဖကျမှာ အမြိုးသမီးတှကေ ကွညျညိုစိတျနဲ့ ကိုယျ့ကို အရမျးရငျးနှီးပကျသကျ လာတဲ့ အခါ အမြိုးသမီး ဆနျ့ကငျြဘကျလိငျဆိုတဲ့ အတှေးမြိုးဝငျသှားတာနဲ့ အမှားတှကွေုံဖို့ မြားလာပါလိမျ့မယျ။ ဒီလိုမဖွဈအောငျ ရဟနျးတျောတှဟော မာတုဂါမတှနေဲ့ အတတျနိုငျဆုံး ထိတှဆေ့ကျဆံမှုမဖွဈဖို့ ရှောငျကွဉျကွရပါတယျ။
ရှောငျကွဉျဖို့လဲ ဝိနညျးသိက်ခာပုဒျမြား ခမြှတျထားခွငျးရှိပါတယျ။ သာမနျအားဖွငျ့ ရဟနျးတျောမြားသညျ မာတုဂါမမြားနှငျ့ထိတှခွေ့ငျး၊ တိုးဝှခွေ့ငျး၊ မပွုမိအောငျ ရှောငျကွဉျ ရပါသညျ။ ရဟနျးမြားနှငျ့ မာတုဂါမတို့ ထိတှတေို့းဝှေ့၍ သာယာမိလြှငျ အပွဈရှိသညျဟု သိမှတျ ထားကွသညျ။
ကာယသံသဂ်ဂ သိက်ခာ ပုဒျအရ အာပတျသငျ့လြှငျ ဂရုကအာပတျ သံဃာဒိသိသျအာပတျမြိုးဖွဈသဖွငျ့ သာမနျဒသေနာကွား အာပတျဖွရေုံနှငျ့မရ၊ ထုံးစံရှိသလောကျ ရကျခြိနျယူ၍ ပရိဝါသျမာနတျ ဆောကျတညျရသညျ။ အဗ်ဘာနျဆောငျ ရသညျ။
ထို့ကွောငျ့ ရဟနျးတျော မြားသညျ မာတုဂါမမြားနှငျ့ မထိမိအောငျ သတိထားကွရသညျ။ သို့သျော အမှတျတမဲ့ထိခွငျး၊ ကား၊ ရထားပျေါစသညျတို့၌ တိုးဝှမေိ့ခွငျး၊ ခွတေျောစုံကို ဦးခိုကျရှိခိုးခွငျး၊အာမိသ ဆကျသရာ ဆှမျးလောငျးလှူရာ၌ လကျခငျြးထိခွငျးသညျ ခွှငျးခကျြသဘောနှငျ့ အာပတျမှ လှတျသညျလညျး ရှိပသေညျ။
ဝန်ဒနဝတ်ထုသ်မိံဣတ်ထိပါဒေ သမ်ပာဟိတှာ ဝန်ဒိတုကာ မာဝါ ရတေဗ်ဗာ၊ ပါဒါဝါပဋိစ်ဆာ ဒတေဗ်ဗာနိစ်စလနေဝါ ဘဝတဗ်ဗံ၊ နိစ်စလဿ ဟိစိတ်တနေ သာဒိတောအနာပတ-၁၃၂ ရှိခိုးသောဝတ်ထု၌ မာတုဂါမတဈယောကျက ရဟနျး၏ခွကေို ဆုပျကိုငျ၍ ရှိခိုးသညျကို တားမွဈရ၏။
ရဟနျးက ခွကေိုသျောလညျးဖုံးထားရမညျ။ ဆုပျကိုငျထိတှေ့၍ ရှိခိုးနလြှေငျ မတုနျ မလှုပျ( မလှုပျ မရှားနေ၍) သျောလညျး နရေမညျ။ ခွထေောကျကို ဆုပျနယျ၍ ရှိခိုးနသေော မာတုဂါမ၏ လကျမှ လှတျရနျ ရုနျးကနျလှုပျရှားသျောလညျး လှတျမွောကျ ရနျသာ လုံ့လထုတျခွငျးဖွဈ၍ အပွဈမရှိဟုဆိုပသေညျ။
ထိုအခကျြကို သတိပွု၍ ဆှမျးခံရာ၌ သပိတျ ကပျခွငျး၊ ပေးလှူခွငျးတို့၌ လကျခငျြးထိသောအရာ၊ ပရိတျသတျထဲ၌ အမှတျမဲ့လကျကို ဆနျ့တနျးရာ၌ မာတုဂါမ၏ ကိုယျအင်ျဂါကို ထိမိသောအရာ၊မိနျးကလေးကို ယောကျြားလေးမှတျ၍ ကိုငျမိသောအရာ စသညျတို့၌လညျး အတူတူပငျဖွဈပသေညျ။
ဒါကွောငျ့ ရဟနျးတျောတှဘေကျကလဲ ဘုရားရှငျဟောပွခဲ့တဲ့ မာတုဂါမမြားနဲ့ ဆကျဆံရမဲ့ နညျးလမျးတှကေို အတိအကြ လိုကျနာကငျြ့သုံးဖို့လိုအပျသလို မာတုဂါမဖွဈတဲ့ အမြိုးသမီးမြားအနနေဲ့ကလညျး ကိုယျကွညျညိုပွီး ရငျးနှီးသိကြှမျးခငျမငျ ခငျြတာမှနျပမေဲ့ လိုအပျတာထကျပိုတဲ့ ရငျးနှီးမှုမြိုးကို မဖွဈစဖေို့ သတိထားသငျ့ပါတယျ။နောကျဆုံးအနနေဲ့ ဘုရားရှငျ ဟောကွားခဲ့တာ ပွောကွားခဲ့တာကို အားလုံး သိအောငျ အောကျမှာ ရေးသားပေးလိုကျပါတယျ…. ဖတျကွညျ့လိုကျပါ။
ရှငျအာနန်ဒာ မှာ မေးခှနျးတှတေိုးလာခဲ့ပွနျပေါ့။ ရဟနျးတဈပါးနဲ့ အမြိုးသမီးထုဆကျဆံရေး နညျးပေးခဲ့ပါဦးတဲ့ တိုတို ရှငျးမိနျ့ဆိုတယျမကွညျ့နဲ့ အာနန်ဒာ တဲ့ မကွညျ့လို့ မဖွဈတဲ့ အခွအေနမြေိုးမှာ ဘုရား တဲ့။ မပွောနဲ့ကှာ အာနန်ဒာ တဲ့။ မပွောလို့လညျး မဖွဈဘူးဆိုရငျကော ဘုရား တဲ့သတိသာ ထားပရေော အာနန်ဒာ တဲ့။ မူရငျးလေးလညျး ဖျောပွခငျြပါသေးတယျ။
ကထံ မယံ ဘန်တေ မာတုဂါမေ ပဋိပဇ်ဇာမ။
အဒဿ နံ အာနန်ဒ
ဒဿ န ဘဂဝါ သတိ ကထံ ပဋိပဇ်ဇိတဗ်ဗံ။
အာလပန်တနေ ပန ဘန်တေ ကထံ ပဋိပဇ်ဇိတဗ်ဗံ
သတိ အာနန်ဒ ဥပဌာပတေဗ်ဗာ။
အာနန်ဒာသညျ အမွျောအမွငျကွီးစှာဖွငျ့ ရဟနျးတျောမြားနှငျ့ မာတုဂါမတို့ ဆကျဆံရမညျ့ နောငျရေးကို တှေးမိလာလေ သညျ။ ရဟနျးတျောမြားမှာ ပရူပဇီဝိပုဂ်ဂိုလျ သူတဈပါးကိုမှီ၍ အသကျမှေးကွသူ မြားဖွဈသောကွောငျ့ ပေါငျးသငျး ဆကျဆံရေးနှငျ့ မာတုဂါမမြားနှငျ့ကငျး၍လညျး မဖွဈနိုငျ။
ဆကျဆံရမညျ သာဖွဈလရော ထိုမာတုဂါမမြား (မိနျးမမြား) နှငျ့ ဆကျဆံသောအခါ၌ ရဟနျးတျောမြား အနဖွေငျ့ မညျသို့ မညျပုံကငျြ့ကွံရမညျ၊နထေိုငျရမညျဟူသောအခကျြကို မွတျဘုရားသကျတျောထငျရှားရှိခိုကျ လြှောကျထား ထိုကျသညျဟု တှေးတောမိသဖွငျ့ နိဗ်ဗာနျစံပြျောတျောမူခါနီး ကာလတှငျ အရှငျအာနန်ဒာက ကပျ၍ လြှောကျ ထားလေ၏။
မြတ်ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကျ ရဟန်းနှင့် မာတုဂါမ ဆက်ဆံရေးကဏ္ဍ
(အရမ်းကောင်းတယ် ဖတ်ထားပြီး လိုက်နာစေချင်ပါတယ်)
မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက ရဟန်းတွေကို မာတုဂါမ မိန်းမတွေနဲ့ ဆက်ဆံရာမှာ ဘယ်လိုဆက်ဆံသင့်တယ် ဆိုတာ အသေအချာလမ်းညွှန် ဟောပြဆုံးမခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့ ဒီလိုဟောကြားပေးခဲ့ရသလဲလို့ သုံးသပ်ကြည့်ရရင် အရိယာ ဖြစ်တဲ့ ရဟန်းတွေအတွက် မာတုဂါမဆိုတဲ့ မိန်းမတွေက ပြဿနာမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ပုတုဇဉ်ဖြစ်တဲ့ ရဟန်းတော်တွေ
အတွက် ကတော့ မိန်းမတွေက အန္တရာယ်တစ်ခုပါပဲ။
အမှိုက်ကစ ပြသာဒ် မီးလောင်ဆိုသလို မဖြစ်ရလေအောင် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် တားမြစ်ထားခဲ့တာလို့ ယူဆပါတယ်။ တကယ်တော့ ရဟန်းဆိုပေမဲ့ ပုထုဇဉ်ရဟန်းတစ်ပါးဟာ ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ သိပ်မခြားနားပါဘူး။ စောင့်ထိန်းရမဲ့ သိက္ခာပုဒ်တွေကိုဖယ်လိုက်ရင် ရဟန်းတော်ဟာလဲ ယောက်ျားတစ်ယောက်ပါပဲ။ ဒါကို မာတုဂါမဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ သေသေချာချာ သိသင့်ပြီး ထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်။
ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ နာမည်ကြီးလှတဲ့ တရားဟော ဓမ္မာစရိယ ဆရာတော်တွေ လူထွက်ပြီး မိန်းမယူခဲ့တာတွေ သိကြ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါတွေက ဘာကိုပြသလဲဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေက တရားဟော ဓမ္မာစရိယတွေ တရားဟောပြော ကောင်းပြီ ဆိုရင် ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် လိုက်လံ နာယူကြတာ တွေ့ရှိပါတယ်။
ဟောတာပြောတာကောင်းလို့ ကြည်ညိုလို့ လိုက်လံ နာယူတာကနေ ရင်းနှီးခင်မင်လိုစိတ်တွေ ဖြစ်လာကြပါတယ်။ ဆရာတော်တွေအနား ရောက်အောင် သွားပြီး ခင်မင်ခွင့်ရင်းနှီးခွင့်ကို ရအောင်ယူ ခြေဆုပ် လက်နယ်ပြု ကုသိုလ်ယူကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေလဲ အများကြီးပါ။
တစ်ချို့ဆို ကြည်ညိုလို့ဆိုပြီး ခြေစုံကို ဦးတိုက်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ၊ ဆရာတော် လာမယ့် လမ်းမှာ ဆံပင်ဖြန့်ခင်းပြီး ဆရာတော်ကို နင်းလျှောက်စေကာ ပူဇော်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကိုယ်က ကြည်ညိုစိတ်နဲ့ လုပ်တာ မှန်ပေမဲ့ ဆရာတော်တွေကလဲ ပုတုဇဉ် လူသား ယောင်္ကျားတွေဆိုတာကို မမေ့သင့်ပါဘူး။
လိုအပ်တာထက် ရင်းနှီးလာပြီ ဆိုရင် သဒ္ဓါလွန်တော့ တဏှာကျွံဆိုသလိုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ရဟန်းတော်တွေ ဘက်ကကြည့်ရင်လဲ ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀ကတည်းက ကိုရင်ဝတ် စာဝါလိုက် အသက်(၂၀)ပြည့်ပြန် တော့ ရဟန်းခံ စာဝါလိုက်ဆိုတော့ မိန်းမအကြောင်း သိဖို့ခဲယဉ်းလှပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးနဲ့ ရဟန်းဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ငယ်ဖြူဆရာတော်တွေဆိုရင်မိန်းမနဲ့ပက်သက်တဲ့ အတွေ့အကြုံ နည်းလွန်းလှပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာ အမျိုးသမီးတွေက ကြည်ညိုစိတ်နဲ့ ကိုယ့်ကို အရမ်းရင်းနှီးပက်သက် လာတဲ့ အခါ အမျိုးသမီး ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးဝင်သွားတာနဲ့ အမှားတွေကြုံဖို့ များလာပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမဖြစ်အောင် ရဟန်းတော်တွေဟာ မာတုဂါမတွေနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမဖြစ်ဖို့ ရှောင်ကြဉ်ကြရပါတယ်။
ရှောင်ကြဉ်ဖို့လဲ ၀ိနည်းသိက္ခာပုဒ်များ ချမှတ်ထားခြင်းရှိပါတယ်။ သာမန်အားဖြင့် ရဟန်းတော်များသည် မာတုဂါမများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း၊ တိုးဝှေ့ခြင်း၊ မပြုမိအောင် ရှောင်ကြဉ် ရပါသည်။ ရဟန်းများနှင့် မာတုဂါမတို့ ထိတွေ့တိုးဝှေ့၍ သာယာမိလျှင် အပြစ်ရှိသည်ဟု သိမှတ် ထားကြသည်။
ကာယသံသဂ္ဂ သိက္ခာ ပုဒ်အရ အာပတ်သင့်လျှင် ဂရုကအာပတ် သံဃာဒိသိသ်အာပတ်မျိုးဖြစ်သဖြင့် သာမန်ဒေသနာကြား အာပတ်ဖြေရုံနှင့်မရ၊ ထုံးစံရှိသလောက် ရက်ချိန်ယူ၍ ပရိဝါသ်မာနတ် ဆောက်တည်ရသည်။ အဗ္ဘာန်ဆောင် ရသည်။
ထို့ကြောင့် ရဟန်းတော် များသည် မာတုဂါမများနှင့် မထိမိအောင် သတိထားကြရသည်။ သို့သော် အမှတ်တမဲ့ထိခြင်း၊ ကား၊ ရထားပေါ်စသည်တို့၌ တိုးဝှေ့မိခြင်း၊ ခြေတော်စုံကို ဦးခိုက်ရှိခိုးခြင်း၊အာမိသ ဆက်သရာ ဆွမ်းလောင်းလှူရာ၌ လက်ချင်းထိခြင်းသည် ခြွင်းချက်သဘောနှင့် အာပတ်မှ လွတ်သည်လည်း ရှိပေသည်။
၀န္ဒန၀တ္ထုသ္မိံဣတ္ထိပါဒေ သမ္ပာဟိတွာ ၀န္ဒိတုကာ မာဝါ ရေတဗ္ဗာ၊ ပါဒါဝါပဋိစ္ဆာ ဒေတဗ္ဗာနိစ္စလေန၀ါ ဘ၀တဗ္ဗံ၊ နိစ္စလဿ ဟိစိတ္တေန သာဒိတောအနာပတ-၁၃၂ ရှိခိုးသောဝတ္ထု၌ မာတုဂါမတစ်ယောက်က ရဟန်း၏ခြေကို ဆုပ်ကိုင်၍ ရှိခိုးသည်ကို တားမြစ်ရ၏။
ရဟန်းက ခြေကိုသော်လည်းဖုံးထားရမည်။ ဆုပ်ကိုင်ထိတွေ့၍ ရှိခိုးနေလျှင် မတုန် မလှုပ်( မလှုပ် မရှားနေ၍) သော်လည်း နေရမည်။ ခြေထောက်ကို ဆုပ်နယ်၍ ရှိခိုးနေသော မာတုဂါမ၏ လက်မှ လွတ်ရန် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားသော်လည်း လွတ်မြောက် ရန်သာ လုံ့လထုတ်ခြင်းဖြစ်၍ အပြစ်မရှိဟုဆိုပေသည်။
ထိုအချက်ကို သတိပြု၍ ဆွမ်းခံရာ၌ သပိတ် ကပ်ခြင်း၊ ပေးလှူခြင်းတို့၌ လက်ချင်းထိသောအရာ၊ ပရိတ်သတ်ထဲ၌ အမှတ်မဲ့လက်ကို ဆန့်တန်းရာ၌ မာတုဂါမ၏ ကိုယ်အင်္ဂါကို ထိမိသောအရာ၊မိန်းကလေးကို ယောက်ျားလေးမှတ်၍ ကိုင်မိသောအရာ စသည်တို့၌လည်း အတူတူပင်ဖြစ်ပေသည်။
ဒါကြောင့် ရဟန်းတော်တွေဘက်ကလဲ ဘုရားရှင်ဟောပြခဲ့တဲ့ မာတုဂါမများနဲ့ ဆက်ဆံရမဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အတိအကျ လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်သလို မာတုဂါမဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးများအနေနဲ့ကလည်း ကိုယ်ကြည်ညိုပြီး ရင်းနှီးသိကျွမ်းခင်မင် ချင်တာမှန်ပေမဲ့ လိုအပ်တာထက်ပိုတဲ့ ရင်းနှီးမှုမျိုးကို မဖြစ်စေဖို့ သတိထားသင့်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဘုရားရှင် ဟောကြားခဲ့တာ ပြောကြားခဲ့တာကို အားလုံး သိအောင် အောက်မှာ ရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်…. ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
ရှင်အာနန္ဒာ မှာ မေးခွန်းတွေတိုးလာခဲ့ပြန်ပေါ့။ ရဟန်းတစ်ပါးနဲ့ အမျိုးသမီးထုဆက်ဆံရေး နည်းပေးခဲ့ပါဦးတဲ့ တိုတို ရှင်းမိန့်ဆိုတယ်မကြည့်နဲ့ အာနန္ဒာ တဲ့ မကြည့်လို့ မဖြစ်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ဘုရား တဲ့။ မပြောနဲ့ကွာ အာနန္ဒာ တဲ့။ မပြောလို့လည်း မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကော ဘုရား တဲ့သတိသာ ထားပေရော အာနန္ဒာ တဲ့။ မူရင်းလေးလည်း ဖော်ပြချင်ပါသေးတယ်။
ကထံ မယံ ဘန္တေ မာတုဂါမေ ပဋိပဇ္ဇာမ။
အဒဿ နံ အာနန္ဒ
ဒဿ န ဘဂ၀ါ သတိ ကထံ ပဋိပဇ္ဇိတဗ္ဗံ။
အာလပန္တေန ပန ဘန္တေ ကထံ ပဋိပဇ္ဇိတဗ္ဗံ
သတိ အာနန္ဒ ဥပဌာပေတဗ္ဗာ။
အာနန္ဒာသည် အမြော်အမြင်ကြီးစွာဖြင့် ရဟန်းတော်များနှင့် မာတုဂါမတို့ ဆက်ဆံရမည့် နောင်ရေးကို တွေးမိလာလေ သည်။ ရဟန်းတော်များမှာ ပရူပဇီဝိပုဂ္ဂိုလ် သူတစ်ပါးကိုမှီ၍ အသက်မွေးကြသူ များဖြစ်သောကြောင့် ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေးနှင့် မာတုဂါမများနှင့်ကင်း၍လည်း မဖြစ်နိုင်။
ဆက်ဆံရမည် သာဖြစ်လေရာ ထိုမာတုဂါမများ (မိန်းမများ) နှင့် ဆက်ဆံသောအခါ၌ ရဟန်းတော်များ အနေဖြင့် မည်သို့ မည်ပုံကျင့်ကြံရမည်၊နေထိုင်ရမည်ဟူသောအချက်ကို မြတ်ဘုရားသက်တော်ထင်ရှားရှိခိုက် လျှောက်ထား ထိုက်သည်ဟု တွေးတောမိသဖြင့် နိဗ္ဗာန်စံပျော်တော်မူခါနီး ကာလတွင် အရှင်အာနန္ဒာက ကပ်၍ လျှောက် ထားလေ၏။